Olee otú Mee Halloween Videos site na mmalite Ọgwụgwụ
Ọ bụrụ na ị chọrọ jide a zuru okè Halloween ọzọ n'ihi na ụmụaka na-achọ iji chebe dum usoro ruo mgbe ebighị ebi, ị pụrụ ịdị mkpa ka na-amụta ime Halloween videos. Ezie na ọtụtụ ndị ga-ukwuu obi abụọ ndị dị mkpa, a ka nwere ụfọdụ atụmatụ maka Halloween videos. Lelee Halloween videos m degharịa na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) n'okpuru.
Na mbụ, họrọ a isiokwu
Ihe a aha maka otu isiokwu bụ ihe a isiokwu maka a video. Dị iche iche video gburugburu dị njikere maka gị. Ka ihe atụ, onye furu efu, zombie ịchụ nta, ọbara nri, ugu anụ, vampire ụlọ na na. Ị pụrụ ịchọta ihe ma ọ bụrụ na ị nwere prank n'obi dị ka m.
Nke abụọ, ihe bụ ihe-ege gị ntị?
Iwete n'etiti-ege gị ntị bụ isi ihe na-aga nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-egosi ya na ndị okenye, ọ ga-egwu na-ọnwụ. Gịnị ma ọ bụrụ na ụmụaka? Ị nwere ike mkpa tinye ụfọdụ na-akpa ọchị ma ọ bụ mara mma stof n'ime.
Nke atọ, kwadebe scripts
Akwadebe scripts ga-eri oge dị ukwuu. Dị ka gburugburu, ebe a bụ m scripts n'ihi na gị akwụkwọ.
Onye furu efu: a mmadụ, na-agba agba a osisi, losts na nkeji na a na iti mkpu na elu-igwe na-na-darker na darker mgbe ahụ ọkụ na-egosi a egwu ihu na a flash.
Zombie ịchụ nta: n'etiti abalị, onye tapped ngwa ngwa na ụzọ. Meghee ụzọ ahụ, a ọbara enyi fells gị na ogwe aka na kwuru na "Zombie na-achụ nta n'obodo a, na-agba naanị". Mgbe ọtụtụ minit, a enyi na-aghọ a n'ezie zombie chọrọ iri nri gị niile n'ezinụlọ.
Ọbara nri: a ìgwè ụmụ akwụkwọ nụrụ ụfọdụ uzu mgbe na-ehi ụra dị n'ogige ahụ. -Apụkwute chọta a eyi-si ụlọ na ụfọdụ yummy oriri. -Atọ ha ụtọ na ọ na mgbagwoju anya uto. Na mberede, otu nwa akwụkwọ okụt ndị ọzọ na-eri ụfọdụ ọbara ikike idi. -Asọ oyi ma na egwu mere. Na ihe oriri niile ghọọ ọbara mmadụ.
Ugu ogologo anụ: Ịnọdụ na yad na-enwe ọnwa-n'abalị. Nna m na-curving na-eme a Halloween ugu n'akụkụ. Mgbe a screech, bụ nna na-egbutu n'ime ọbara ogbenye. Ị anya azụ hụrụ nke a ugu ogologo anụ ọjọọ ihu. Achị ọchị ma na-achụ mgbe gị.
Vampire ụlọ: Ìhè na-n'otu ntabi, tebụl jupụtara skulls. Ududo web bụ fọrọ nke nta n'ebe nile. Ihe i nwere ike ịnụ bụ na-achọsi ike olu - Nri m ụbụrụ gị.
M na dị nnọọ oghe uche m a obere, ị pụrụ ịgbaso scripts ihe ihikosi akụkọ.
Anọ, na-amalite igba
The preset dị n'elu, ugbu a ị na-amalite gbaa. Icho mma idaha ka kwa gị akwukwọ, n'ịkwado ziri ezi-eme ihe nkiri na-eme ka n'aka na i nwere a dijitalụ camcorder dị ka Sony HDR-CX380 / B. Na nke a, ị nwere ike jụọ maka enyemaka ụfọdụ site n'aka ndị enyi dị ka gị abụọ anya, n'ihi na ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na i nwere ike gbaa a idaha dị iche iche na mmụọ ozi, nke dị mma maka gị nzọụkwụ ọzọ - edezi.
Ise, dezie Halloween videos
5 akụkụ kwesịrị ntị na a nzọụkwụ.
A. Ụfọdụ isi iwu mgbe edezi Halloween videos. Ogbugba Mpaghara nwere ike nkewa na omimi na n'obosara. Ị na-eji mgbanwe n'etiti dị iche iche Mpaghara ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-egosi Hollywood nkiri ịke. Gbalịa ngwa dị iche iche Mpaghara dị iche iche na omimi na obosara ka ọ na ihe n'ezie. Jiri ngwa ngwa ngagharị mgbe ị chọrọ na-elekwasị anya ihe. Iwepụtakwu oge mgbe ị chọrọ igosi dum foto ka-ege ntị.
B. The nnukwu atụmatụ nke Halloween videos lays na ụda mmetụta na visual mmetụta. E nwere free jọgburu onwe nsonaazụ ụda pụrụ ịchọta online. Anọgidewokwa na-anyụ liri, ụzọ oghe, nwaanyị Chịa, vampire tiekwanụ mkpu ákwá, ogologo anụ mbigbọ na na. Ego ọzọ free Halloween nsonaazụ ụda ebe a.
C. ụfọdụ pụrụ iche mmetụta maka Halloween pụrụ ịchọta ụfọdụ dị ike video editọ, nke na-enye Halloween themes. Dị ka kwa dị iche iche gburugburu, na mmetụta pụrụ ịbụ dị iche iche. A na-acho inweta n'abalị pụrụ jikọtara na ọkụ, icha mmirimmiri ihu, na-eyi na-ụlọ, ọbara n'okporo na na. A vampire akụkọ nwere ike mma na mmadụ ọkpụkpụ, ọbara kemmiri ihe, eze nko na ọbụna arụsị foto ndị si The Vampire Dairies. A witched video nwere ike tinye ụfọdụ na-efe efe broom, amoosu okpu na ákwà mgbokwasị. Ego ọzọ Halloween video mmetụta ebe a.
D. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, i nwere ike mkpa ụfọdụ pụrụ iche mmetụta dị ka green-ihuenyo, mgbe ị chọrọ iji dochie ndabere ụfọdụ pụrụ iche Mpaghara dị ka n'ọgbọ agha na ozu gburugburu. Ma ọ bụ na ị chọrọ PIP ọrụ (multi-ihuenyo mmetụta) na-egosi dị iche iche spooky Mpaghara n'otu ihuenyo. Mgbe ahụ a dị ike na n'elu mmetụta na mfe na-eji video nchịkọta akụkọ bụ ihe dị gị mkpa. Ego otú ịhọrọ nri video edezi omume ebe a.
E. Mgbe ahọrọ nri video nchịkọta akụkọ, mkpa ka ị mara otú dezie Halloween videos nzọụkwụ site nzọụkwụ.
a. Download na wụnye Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) n'okpuru (pịa ịmata guideline nke ngwaahịa a)
b. Record dum akụkọ ị chọrọ ịgwa. Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-enweghị ihe ọ bụla pụrụ iche akụkọ n'uche? Ịnwere ike idekọ dum usoro na camcorder mgbe akwadebe maka nke a Halloween ọzọ gụnyere esi mee ka a Halloween ugu, ihe di iche iche nke Halloween Ezi ntụziaka kwadebere maka ụmụaka, idaha ụmụaka na-ekiri jọgburu onwe fim, jọgburu onwe alakpu ụra akụkọ ị dị njikere, oge mgbe ụmụaka na-etinye na Halloween omenala na ụlọ mma i mere n'ihi na nke a ọzọ. Ma ọ bụ ọbụna download ụfọdụ jọgburu onwe fim online na bee si kasị akpali akpali akụkụ ị chọọ mgbe ahụ jikota ha ọnụ na spooky mmetụta.
c. Jikọọ camcorder ka PC na mgbe mbubata niile video faịlụ na foto Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) ozugbo. Lelee jọgburu onwe obere fim maka ụmụaka na m PC dị ka ndị na (ibudatara YouTube na Free YouTube Downloader). Mkpa ụfọdụ jọgburu onwe ogologo fim maka Halloween, ego ebe a.
d. Ugboro abụọ click ẹkedori Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) ma họrọ Full Njirimara na ọnọdụ.
e. Pịa "Import" Ibu Ibu faịlụ niile ka "ọrụ 'Album" ebe maka ọzọ edezi.
f. Họrọ ha niile na ịdọrọ-n-dobe ka usoro iheomume ozugbo
g. ịhụchalụ video na pịa "kwụsịtụ" button n'okpuru preview window na akụkụ na ị chọrọ ịnọgide na "Split" mkpa. Wee pịa ya ọzọ mgbe ọ na-akwali na akụkụ ị chọrọ ka ihichapụ. E nwere mmalite isi na ọgwụgwụ mgbe echiche. Ị nwere ike bee na mmalite isi na mgbe ahụ bee ọzọ na ọgwụgwụ ebe. The akụkụ n'etiti mmalite na ọgwụgwụ mgbe bụ ihe ị chọrọ.
h. Họrọ akụkụ ị chọrọ ka ihichapụ wee pịa bọtịnụ "Hichapụ"
m. Ị nwere ike ịdọrọ slide mmanya ka ịhazie echiche size nke usoro iheomume.
j. Mgbe ahụ iji ụfọdụ agbakwunyere mmetụta dị ka Fire ike creepy ma ọ bụ spooky visual mmetụta. Mkpa ka ị ịdọrọ mmetụta ka usoro iheomume mbụ ka ịhụchalụ n'ihi. (Ọ ga-nweta nkwalite nzi preview na obere oge.)
k. Ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị mbụ ụda, ị nwere ike nri pịa faịlụ na usoro iheomume na "Ogbi" ya. Wee jiri agbakwunyere nsonaazụ ụda dị ka "Chịa" ike Halloween ụda mmetụta.
l. Ma ọ bụ ị pụrụ ọbụna iji voiceover idekọ ọ bụla ị chọrọ, nke ga-fanye ka video faịlụ-akpaghị aka. Ya mere, ị pụrụ nanị pịa "Record a Voiceover" button mgbe ị melite mmalite ebe. N'ezie n'ihi na ọtụtụ nke horriable fim, ndị isi ọrụ bụ mma. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ dezie gị nkịtị videos ka spooky ndị na pụrụ iche utịp, i nwere ike iji na-eso ọrụ.
m. Iji PIP ọrụ na-tinye ụfọdụ ndị mmụọ ọjọọ ma ọ bụ ekwensu ihu ke video. Ma ọ bụ gosi multi-ihuenyo n'otu oge na ego esi mee ka multiscreen video ebe a. Ma ọ bụ dochie ndabere na greenscreen na ego otú iji greenscreen ebe a.
Isii, zọpụta na-ebipụta na dị iche iche nyiwe
Mgbe dezie, ọ bụ oge ịzọpụta na-ebipụta a Halloween video. N'ozuzu-ekwu okwu, ị ga-achọ ịkọrọ ya online ozugbo. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike pịa YouTube, Facebook ma ọ bụ Vimeo nhọrọ. I nwekwara ike ịzọpụta ya na gị na PC ma ọ bụ ngwaọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-akwado ka ọkụ na-DVD ozugbo. Site n'ụzọ, ị nwere ike ịzọpụta video oru ngo na bụrụ na ị chọrọ reopen na reedit ya.
> Resource> Video> Olee otú Mee Halloween Videos site ná mmalite ruo Ọgwụgwụ